Indlu esemaphandleni eyakhiwe ngamaplanga nezindlu eziselunxwemeni, nezilwanyana zasekhaya - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni eyakhiwe ngamaplanga nezindlu eziselunxwemeni, nezilwanyana zasekhaya
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguTessa
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uTessa iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu esecaleni kolwandle esecaleni ehlathini kangangemizuzu eyi-10 xa uhamba ngeenyawo ukusuka kunxweme olukhuselekileyo lwe-E Eagle Bay, elungele iintsapho okanye izibini ezithandanayo. Wamkelekile ukuzisa izilwanyana zakho eziziphethe kakuhle ( akukho ntambo).
Indlu yethu esemaphandleni inekhitshi elikhulu elivulekileyo/indawo yokutyela nendawo yokuhlala enesitovu esisembizeni kunye neveranda ukuze uphumle kuyo. Kukho amagumbi okulala ayi-3 kwindlu enkulu ukumkanikazi omnye, ibhedi elala abantu ababini enye nenye emibini okanye enkulu. Indlu eyakhiwe ngamaplanga esecaleni kwendlu enkulu ilala abantu abayi-4 (ayinayo indlu yangasese).
Sinendlela entle yokulandelela ekugqibeleni kwe-cul de sac kunye nendlu esemaphandleni entle kakhulu.
Indlu esemaphandleni ilala kamnandi abantu abathandathu ibe kukho indlu esecaleni kwayo enokubhukishwa ngabantu abayi-4 nangaphezulu abalala abantu abayi-4 nangaphezulu (ayikho indlu yangasese) . Hlala kwi-veranda uze ubukele ubomi beentaka obuninzi kuquka iindwendwe zethu ezihlala ziluhlaza. Ebusuku nyuka ukuze ubone i- kangaroos ehlathini emva kwethu.
Hamba uye kumanzi amahle akhuselekileyo ase-E Eagle Bay akhuseleke ngenxa yokunyuka komoya. Kukho i-Rocky Point surf break ekugqibeleni kwitheku.
Izinto ezinokusetyenziswa : i-Wifi engenamida, amagumbi okulala ayi-4, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi, indawo yokuhlamba iimpahla, indawo yokuphumla, ioveni ye-microwave, ioveni ye-lve kunye nomphezulu wokupheka, isisu sembiza, izixhobo zombane, isitovu, isilingi kunye neefeni ezisemgangathweni, umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wokomisa izimuncumuncu, usonge isofa usana, ibhafu, iishawa eziyi-2, inkqubo yesandi, indawo yokoja yegesi, ii-verandas eziyi-2, i-pergola eneendawo zokuhlala zangaphandle, ifriji, igadi entle esemaphandleni
kunye nebhulorho Yiya elunxwemeni.
4.74 · Izimvo eziyi-61
Indawo : ngaphantsi kweeyure eziyi-3 ngemoto ukusuka ePerth, imizuzu eyi-10 ukuya eDunsborough, imizuzu eyi-20 ukuya eYallingup kunye ne-50 ukuya eMargaret River.
Yonwabela iindawo ezininzi zokwenza iwayini, iindawo zokwenza ibhiya kunye neendawo zobugcisa, iindawo zokusefa ezikumgangatho wehlabathi, imiqolomba, ukuhambahamba ngaselunxwemeni (ukusuka endlwini yethu), ukukhwela amahashe, ukuhamba ngebhayisekile entabeni, ukuloba, ukuntywila, ukuthenga kwiivenkile ze-boutique kunye neekhefi eDunsborough, iimarike zamafama okanye uphumle nje kwi-veranda!
Umbuki zindwendwe ngu- Tessa
Hi Im Tessa we are lucky enough to live with our fammily in Perth west australia we make available our beautiful beach cottage to rent in eagle bay we hope you enjoy it as much as we have over the years.
Sihlala ePerth ngoko asikho kwisayithi kwaye uza kuba nemfihlo ngokupheleleyo nangona kunjalo omnye wethu usoloko efumaneka ukuba aqhagamshelane nawe ngefowuni ukuba kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Eagle Bay